လင်္ကာ: မြောက်ပိုင်းမြေမှ ပုံရိပ်များ ( အပိုင်း -၁)
by Ko Lin Wai Aung on Saturday, 21 January 2012 at 01:14
သူတွေကသူတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်တွေတွေကို ဖေါ်ထုတ်ပေးဘို့ မသေခင် မှာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ လည်း မလွဲမသွေ ဖေါ်ထုတ်ပေး ဘို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အချိန်အခါသင့်ပြီလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ပန်းချီကိုထိန်လင်း၊ မနန်းအောင်ထွေး ကြည် တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေ online မှာဖတ်ကြရမှာပါ။အားလုံး အဖြစ်မှန်တွေပါ။ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှစေ့ဆော် လို့ပြောနေ တာ မဟုတ် ပါ ဘူး။ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက ဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ဘယ်သူတွေဘယ် လို ဖန်တီးခဲ့ကြသလဲ ဘယ်သူတွေမှာတာဝန်ရှိခဲ့ကြသလဲဆိုတာတွေပါ။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်(ခရိုင်မှူး)တာဝန်ယူခဲ့ရသလိုစစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲဖမ်းဆီးတာ ကိုကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့နဲ့အတူခံခဲ့ရပါတယ်။ဗဟိုကော်မတီတွေထဲကကိုညီညီကျော်(မန္တလေး)၊ ဦးစိန်(ရန်ကုန်)၊ကိုတင်မောင်အေး(ကသာ)၊ကိုစိုလင်း(မန္တလေး)တို့လည်းဖမ်းခံရတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။ ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးကျော်ကျော်အုန်းနဲ့ဦးရန်နောင်စိုးတို့လည်းဖါးကန့်ဘက်မှာကိုမျိုးဝင်းလူတွေရဲ့လိုက် လံသတ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ ကိုစိုလင်းကတောင်ပိုင်းမှာဖမ်းခံရပါတယ်။
တကယ်တော့ထောက်လှမ်းသံသယနဲ့သတ်ဖြတ်တာဟာမကဒတ(ကချင်)လက်ထက်ကတည်းကရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ကိုမြတ်ကိုကို(ရေဆင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား)(မြင်းခြံ)ဟာ၁၉၈၉နှစ်ကုန်လောက်မှာသံသယနဲ့ အသတ် ခံခဲ့ရတာပါ။ကိုမျိုးဝင်းပြောဘူးတာကတော့မြတ်ကိုကမသွားနဲ့လို့ပြောထားတဲ့နေရာတွေကိုသွားတယ်တဲ့။ ဘယ်နေရာလဲမေးတော့ ရဲမေဆောင်တို့ဆေးခန်းတို့ကိုတဲ့….အံ့သြစရာပါဘဲ။
သတ်ခံခဲ့ရ ပါတယ်။စစ်ထောက်လှမ်းရေးသံသယနဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရ လို့သေဆုံးရ သူပေါင်း (၃၅) ဦးနဲ့နှိပ်စက်ခံရပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူပေါင်း( ၇၀ )ဦးရှိပါတယ်။စာရင်းအသေးစိတ်ကို လည်းတင်ပြသွားမှာပါ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့မကဒတ(မပ)မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမကဒတ(ကချင်)ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်က စပြီးသိခဲ့မြင်ခဲ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကို ပြောပြသွားချင်ပါတယ်။အခြေအနေအားလုံးကိုခြုံငုံမိနိုင်မလားလို့ပါ။
တယ်…..၁၉၈၈-၈၉မှာတရားဝင်ရပ်တည်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါ့…. ဥက္ကဋ္ဌ ကကိုအောင်ဇော်မင်း( ချိုတူးဇော်) ပါ...
ကျွန်တော်မကဒတ(ကချင်)ကိုမသွားခင်၁၉၈၉ဂျူလိုင်လဆန်းလောက်မှာကိုအောင်နိုင်တယောက်ဘောင်ဒရီ လမ်းကကျွန်တော်တို့ရုံးကိုရောက်လာတယ်…..သူနဲ့အတူပါလာတာကကိုထွန်းအောင်ကျော်တဲ့…အ ထက်မြန်မာပြည(်ဗကသ)ကတဲ့…အခြေအနေမကောင်းလို့ရန်ကုန်ကိုခဏလာနေတာတဲ့…ခင်စ ရာကောင်းပြီး..အရာရာကိုလေးလေးနက်နက်တွေးတတ်တဲ့မျက်နှာမျိုးပါ….ပထမဆုံးဆုံဖူးးတာပါ…. .မန္တလေးကျောင်းသားညီလာခံမှာတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး…..ဆေးရုံတက်နေရတယ်လို့တော့ပြော တာကြားခဲ့ရတယ်။
ချောင်း(အခသ)ကကိုမိုးကျော်သူ(ခ)ကိုဘိုဘိုပါ…သူ့အသက်က၁၆နှစ်ကျော်ရုံဘဲရှိပါသေးတယ်…ကျွန်တော် ကတော့၂၁နှစ်ကျော်ကျော်ပေါ့...ဒီလိုနဲ့မန္တ လေးရောက်…ကိုစိုးလင်းတို့ကိုအောင်နိုင်တို့နဲ့တွေးပြီး…. လားရှိုးမူဆယ်ကတဆင့်ရွှေလီမြစ်ကိုကူးပြီး…တရုပ်ပြည်ရွှေလီနယ်စပ်မြို့လေးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်… မိသားစုတည်းခိုခန်းသေးသေးလေးမှာတည်းတယ်…ညနေလောက်ကျတော့မိုးညှင်းကကိုမြင့်ကျော်နဲ့ ကိုကျော်ခိုင်ဝင်းတို့ရောက်လာကြပါတယ်…သူတို့က(မိုးညှင်းအနကလ)ကပါ…နောက်တော့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်က ကိုကျော်စွာဝင်းမောင်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ပါရောက်လာတယ်... လူတွေများ လာတော့ပျော်ပါတယ်…
နောက်နေ့မကဒတ(ကချင်)ကကိုရာကေး(ခ)ကိုကျော်မြင့်ရောက်လာပြီးခရီးဆက်ထွက်ဘို့တာဝန်ယူပြင်ဆင်ပါတယ်…ရွှေလီကနေနာရီဝက်လောက်ကားစီးပြီးဝမ်တိန်နယ်စပ်မြို့လေးကတရုပ်ရဲစခန်းမှာလက်မှတ်လုပ်ရပါတယ်...နေခွင့်လက်မှတ်ပေါ့…(၁၀)ပေလောက်ချောင်းလေးဘဲခြားတဲ့မြန်မာပြည်ဘက်ကမ်းကတောင်ကုန်းလေးတွေပေါ်မှာတော့ သွတ်မိုးအဆောက်အဦးလေးတွေနဲ့….ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း) တဲ့…
နေတာ…အရပ်က၆ပေကျော်မယ်…ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့…မွတ်ဆလင်တဦးပေါ့။ တရုပ်စကားတော့အဆင်ပြေ အောင်ပြောနိုင်တယ်… သူကရှေ့ကသွား… ကိုယ်တို့ကနောက်က လိုက်ပေါ့… ၄၀ဒီဂရီလောက်ပဲမတ်တယ်…တစ်နာရီ
အကွေ့တစ်ခုကိုကျော်လိုက်တော့ဂိတ်တစ်ခုကိုဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရတယ်…ကားလမ်းကိုကန့်တားထားတဲ့ ဂိတ်မောင်းတံလဲတွေရတယ်…မလှမ်းမကမ်းဘယ်ဘက်ကကုန်းလေးပေါ်မှာကနယ်ခြားကျောက်တိုင်လေး တစ်ခု…KIAရဲမေ၂ယောက်ဂိတ်မှာစောင့်နေတာတွေ့တယ်…ညာဘက်ကိုကွေ့ပြီးကားလမ်းအတိုင်း ၁၀မိနစ်လောက်သွားရင်KIAရုံးတွေနဲ့သူတို့လူကြီးတွေနေတဲ့အိမ်တွေကိုရောက်တယ်တဲ့…
အဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကကိုစိန်သန်းသူကကော်မတီရုံးတာဝန်ခံပါ…သဘောကောင်းပြီးခင်စရာကောင်းပါတယ်..နောက်ကိုစောမြအောင်…ကိုမျိုးဝင်းနဲ့အနီးကပ်နေရသူပါ…နောက်တော့ဝါဒဖြန့်ချီးရေးအဖွဲ့(pro-team)အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်…..နောက်တစ်ဦးကဦးသောင်းမြင့်ပါ…တန့်ဆည်ကပါ… ထမင်းချက်တဲ့အဆောင်မှာဘဲနေတယ်…အသက်က၆၀နီးပါးလောက်…သူမကြာမကြာဆိုပြတတ်တဲ.သီချင်းက…..
(၄)ထိရှိသွားပါပြီ။အနိမ့်ပိုင်းလမ်းရဲ့တဖက်မှာတော့ရဲမေဆောင်ကိုတွေ့ရတယ်…၁၀ယောက်လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်... နေက်တစ်ရက်ရဲမေဆောင်ဘေးမှာဆေးခန်းဆောက်တော့မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ့ဝိုင်း ကူကြပါတယ်.(၅)ရက်လောက်နေတော့အောက်ဖက်စခန်းမှူးတဲဘေးကဘားတိုက်အရှည်လေး မှာပြောင်းနေ ရပါတယ်..
နောက်ကိုမြင့်ကျော်၊ကိုကျော်ခိုင်၊ကိုိသန်းထွန်းစိုး၊ကိုအောင်ကျော်၊ကိုတင်ဋ္ဌေး၊ကိုညီညီအောင်(ပဲခူး)၊ ကိုညီညီကျော်ရွှေဘိုကကိုအုန်းကြိုင်(ok)ကိုရန်ရှင်း(မြင်းခြံ)၊တဖွဲဖွဲရောက်လာကြပါတယ်… ကိုရန်ရှင်းကသူ့သူငယ်ချင်းမြတ်ကိုအသတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်လို့လာတာလဲပါတယ်…
ကိုမျိုးဝင်းနဲ့(၂)ခါလောက်သူနဲ့စကားပြောတာကိုသိပေမဲ့ဘာတွေပြောသလဲဆိုတာမသိဘူး.ဒီလိုနဲ့သင်တန်း တက်ဘို့လူပြည့်အောင်စောင့်ရင်းတပ်ကပေးတဲ့ရိက္ခာစားရင်းနေရတယ်…သင်တန်းဆရာတွေကတစ်ချို့စခန်းးမှူးတဲမှာနေကြတယ်…ဆရာဝင်းနောင်(လူ့ဘောင်သစ်-ဗဟန်း)၊ဆရာရွှေမျှင်၊ဆရာယောရှူ၊နဲ့သင်တန်းမှူးဒုဗိုလ်လှဆိုင်းတို့ပေါ့…ဆရာမင်းဋ္ဌေးနဲ့တချို့ကနောင်ရာပါ စခန်းမှာရှိတုန်းလို့ထင်ပါတယ်…
တန်ဟင်းပေါ့…ငရုပ်သီးလှော်ကတခါတရံပါတတ်တယ်…ကိုကျော်ကျော်နိုင်ညဘက်ဖမ်းတဲ့ကြွက်ကိုမီး ကင်စားရတာလဲမှတ်မိသေးတယ်…ရာသီဥတုကအရမ်းအေးတယ်…jan,febဆိုအအေးဆုံးလို့ပြောတယ်. .လေကလဲတဟူးဟူးနဲ့အမြဲတိုက်နေတာ…အနွေးထည်အမြဲဝတ်ထားပြီးအလုပ်မရှိရင်မီးလှုံနေရတယ်… ညဘက်ဂွမ်းစောင်အထူနှစ်ထပ်လောက်ခြုံမှနဲနဲနွေးလို့အိပ်ရတာ …ဆေးလိပ်သောက်ချင်ရင်kiaမိသားစုတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာပါလာတဲ့အင်္ကျီလေးတွေရောင်းပြီးမှ ၀ယ်သောက်ရတယ်… စတိုကထုတ်ပေးတာ ကတခါတရံမှ ဆိုတော့မလောက်ကြဘူး…သတင်း
လောက်ရှိလာပါတယ်…ရန်ကုန်မှာအတူနေခဲ့ကြတဲ့စမ်းချောင်းအခသကကျော်ဝဏ္ဏ(မြေနုစခန်းတွင်တိုက် ပွဲကျ)ကိုကျော်ဝင်းဆွေ(ဖိုးကျော်)၊ကိုမိုးဟိန်း(နောင်ရာပါစခန်းရေကြီးစဉ်ရေထဲမျောပါကွယ်လွန်)၊ ကိုပေါက်(ဇော်ခင်ဦး)(မြစ်ကြီးနားခရိုင်တွင်ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့်သေဆုံး)တို့လည်းရောက်လာကြပါတယ်…
ချောင်ကူးတံတားသေးလေးကျော်ရင်ကုန်းပေါ်ကိုပြေပြေလေးတက်သွားတဲ့လမ်းလေးရှိတယ်… ကုန်းပေါ်မှာသစ်ပင်စုစုလေးတစ်စုရှိတယ်….ရှေ့ကစီနီယာရဲဘော်ရဲမေတွေကမြတ်ကိုကုန်းလို့တိုး တိုးပြောကြတယ်….ကုန်းရဲ့အပေါ်နောက်ဘက်ကလျှိုထဲမှာသတ်ပစ်ခဲ့တာတဲ့ …ထောက်လှမ်းရေးလို့လဲပြောကြတယ်တဲ့…
တယ်…ဘာအပြစ်ရှိလဲမသိခဲ့ပါဘူး…ဆိုင်းရာကအင်မတန်ချောမောလှပပါသတဲ့… သီချင်းဆိုလဲအလွန်ကောင်းတယ်ဆိုပဲ...လသာတဲ့ညတွေဆိုရင်ဆိုင်းရာရဲ့သီချင်းသံကိုပိုပြီးကြားကြရ တယ်တဲ့… ဒါကြောင့်ဆိုင်းရာကုန်းလို့အစပိုင်းမှာခေါ်ကြတယ်တဲ့…
ဆောင်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေရာမှာဘဲပြန်တမ်းထုတ်ပြီးသတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့…တပ်ကချထားတဲ့စည်း ကမ်းတွေမလိုက်နာလို့-ဆိုပါတယ်…KIAဗဟိုမှာအိန္တိယနယ်စပ်ကနေသင်တန်းလာတက်ကြတာပါ… ဒီအဖွဲ့မှာအာသံ၊မဏိပူရ်၊နာဂ၊မီဇိုရမ်၊(၄)ခုပေါင်း ထားတာပါ…
နောက်ပိုင်း၁၉၉၂ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၂)ရက်နေ့မှာဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်အပါအ၀င်ကျောင်းသား လူငယ်(၁၅)ဦးကိုစစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့မတရားစွပ်စွဲပြီးကိုမျိုးဝင်း၊ကိုအောင်နိုင်၊ကိုလှဆိုင်း၊ ကိုသံချောင်း+………..တို့ရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာပဲသတ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ…
တော်တို့(၇)ဦးကိုမျိုးဝင်းတဲမှာရှိနေကြပါတယ်…မိဘတွေလာပြီးအာမခံရင်ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ သူတို့ရွေးထားတဲ့သူတွေပါ…အိမ်တွေကိုစာရေးဖို့ခေါ်ထားတာပါ… ကိုညီညီ၊ကိုကျော်နိုင်ဦး၊မနန်းအောင်ထွေးကြည်၊ကိုဝဏ္ဏဇော်ကိုမိုးကျော်သူ(ကိုဘိုဘို)၊ ကိုညီညီအောင်(ပဲခူး)၊နဲ့ကိုရဲလင်းတို့ပါ…
တည်းရှင်းပစ်လိုက်ဆိုပြီးမှာလိုက်တယ်…နာရီဝက်လောက်နေတော့ဦနင်ဂျာနဲ့အဖွဲ့ပြန်ရောက်လာပြီး ကိုမျိုးဝင်းကိုပြောတယ်…ဆေးရုံကရောဂါပျောက်သွားပြီမို့လို့လာခေါ်ဘို.ဖုန်းဆက်တာတဲ့… .ပြန်ခေါ်လာပါပြီလို့သတင်းပို့တယ်….ကိုမျိုးဝင်းက“ထွက်ပြီးတဲ့ဆင်စွယ်ပြန်ဝင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူး” လို့ပြောပြီး(၁၂.၀၂.၁၉၉၂)နေ့ကသုံးခဲ့တဲ့ငွေရောင်ဓားရှည်(ဓားအိမ်ပါ)ကိုအခန်းထဲကနေယူပြီး ဦးနင်ဂျာလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ဦးနင်ဂျာဆိုတဲ့သူကကိုမျိုးဝင်းတို့နမ္မား(နန့်စလော်ရွာ)ကပါ…ကိုမျိုးဝင်းခိုင်းရင်အကုန်လုပ်တယ်… သတ္တိရှိတယ်…အမိန့်နာခံတယ်…ရိုးသားတဲ့လယ်သမားဘ၀ကလာတာပါ…ကိုမျိုးဝင်းရဲ့အသုံးချခံဖြစ် သွားခဲ့ပါတယ်…
အသေးစိတ် ကတော့တစ်ဦးတည်းသောသက်သေမခင်ရွှေလှိုင်(ကိုသံခဲကတော်) ကအသေးစိတ်ပြောနိုင်ပါ တယ်…သူအဲဒီနေ့(၁၂.၀၂.၁၉၉၂)က အစအဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့သူပါ…သတ္တိရှိရှိလိုက်ကြည့်ခဲ့တာပါ…
တယ်ဆိုတော့ကိုအောင်နိုင်(အနကလ)ကဘဲစီစဉ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကွတ်ခိုင်အနီးကကျောင်းသားတပ်ရင်း (၄၀၁)ကိုပို့ပေးခဲ့တာပါ…တပ်ရင်း(၄၀၁)ရဲ့တဦးတည်းသောရဲမေပါ…နောက်ပိုင်းကိုသံလွင်၊ကိုဇော်နော်တို့ ရင်း(၄၀၁)စစ်ရေးအခြေအနေအရမြောက်ပိုင်းရင်း(၇၀၁)ကိုရဲဘော်တချို့ပို့တော့အတူပါလာတာပါ… အမှန်တရားကိုလိုလားသူတစ်ဦးလို့ယုံကြည်ပါတယ်…
Ko Lin Wai Aung facebook စာမျက်နှာမှကူးယူဖော်ပြသည်။
မိခင်တဦး၏ ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်း-အပိုင်း(၂)
မိခင်တဦး၏ ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်း-အပိုင်း(၁)
ကိုရဲလင်းနှင့်Burma VJ အင်တာဗျူး(ရုပ်သံ)
မအေးခဲသွားနိုင်တဲ့ မြောက်ပိုင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာ။(ရွှေစင်ဦး)
မကဒတ(ကချင်)နှင့် မကဒတ ဗဟိုကော်မတီဝင်များစာရင်း
မကဒတ(မပ)တွင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးများဟု စွပ်စွဲခံရပြီး သေဆုံးခဲ့သူများစာရင်း
Kyaw Gyi AB ကျော်မြင့်(ခ)ရာကေး(ခ)ဒူးရှည်ကမွတ်စလင်မဟုတ်ပါဘူးဟိန္ဒူပါ။ ကျော်ဝဏ္ဏ မဟုတ်ဘူး ဝဏ္ဏကျော်(စမ်းချောင်း)၊ကြောင်ဝဏ္ဏလို့ ခေါ်ကြတာလေ